Microdosing Psychedelics ma kor u qaadi karaan hal-abuurka? • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Daroogooyinka Cilmi-nafsiga maskaxda ee yar-yar ayaa kor u qaadi kara hal-abuurka?
albaabka daroogada January 17 2022
maqaal by daroogada January 17 2022
Maalmaheedii quruxda badnaa ee hallucinogenka ah waxa hubaal ah in ay raad ku lahayd fanka iyo dhaqanka. Xirfadlayaasha cilmi-nafsiga ayaa dhiirrigeliyay shaqada fannaaniinta, qorayaasha iyo fannaaniinta in ka badan 60 sano, saameyntooda hal-abuurnimona lama dareemin.
1 Waa maxay microdosing?
2 Cilmi-nafsiga ayaa bixiya boos hal-abuurnimo
3 Microdosing iyo hal-abuurka: caddaynta
4 Codso caddayn maskaxeed
5 Mustaqbalka microdosing
Walxahani kuma eka oo kaliya dhaqan-ka-hortagga. Psychedelics ku dhex dhuuntaan dawooyinka casriga ah oo ay wax ka beddelaan dhaqanka dhimirka, laakiin saamaynta ay ku leeyihiin hal-abuurka ayaa sii jirta. Waxaan hadda aragnaa kororka isticmaalka cilmi-nafsiga ee goobta shaqada, qaabka microdosing.
Waa halka uu saynisku ku kulmo fanka: microdosing ma dhiirigelin karaa hal-abuurka?
Waa maxay microdosing?
Microdosing waa isticmaalka qiyaasaha subhallucinogenic ee walxaha dhimirka, gaar ahaan LSD iyo psilocybin-ka kooban 'boqoshaada sixirka'. Qiyaasta yar-yar waxay ku saabsan tahay toban-meelood meel qiyaasta madadaalada caadiga ah; kuma filna in la kiciyo safar maskaxeed, laakiin laga yaabee in ku filan si aan si hoose u bedelno awooddeena garashada.
Awoodda daawaynta ee isticmaalka qiyaasaha sare ee dhakhaatiirta dhimirka ayaa muddo dheer la sahamiyay. Tan iyo kontonaadkii, LSD wuxuu muujiyay ballan qaadka daaweynta khamriga iyo balwadda. Psilocybin waxay wax ku ool u noqon kartaa daawaynta niyad-jabka, walaaca jira iyo xanuuno badan oo maskaxeed. teraabiyada cilminafsiga ee uu caawiyay cilmi-nafsiga ayaa qarka u saaran guusha iyo xiisaha caafimaad ee dawooyinkan ayaa sii kordhaya.
Si ka duwan isticmaalka cilmi-nafsiga-sare ee cilmi-nafsiga, la isku halleyn karo, cilmi-baaris lagu sameeyay faca-yada ee saameynta microdosing ayaa maqan, laakiin taasi kama joojinayso dadka inay isku dayaan naftooda.
Microdosing ayaa helaysa caan, laakiin maxay dadku u sameeyaan? Dadka qaarkiis waxay ogaadaan in daawada yar-yar ee dhimirku ay yarayn karto calaamadaha walaaca ama niyad-jabka. Kuwa kale waxay u arkaan inay wanaajiso wax soo saarkooda iyo feejignaantooda. Laakiin waxaa laga yaabaa in sababta ugu badan ee microdosing ay tahay kicinta hal-abuurka.
Cilmi-nafsiga ayaa bixiya boos hal-abuurnimo
Safarrada maskaxeed waxaa weheliya muuqaal duurjoog ah iyo muuqaal qurux badan, oo lagu doodi karo meesha ugu sarreysa ee hal-abuurka gudaha. Waayo-aragnimadan maskaxeed ayaa dhiirigelisay fannaaniinta adduunka oo dhan muddo tobanaan sano ah. Dhab ahaantii, saamaynta LSD ee fannaaniinta 60-meeyadii, oo ay ku jiraan Beatles, Jimi Hendrix, iyo Pink Floyd, ayaa horseeday soo ifbaxa noocyada muusiga ee maskaxda.
Hal-abuurnimadu waa adeegsiga male-awaalkeena si aan u abuurno fikrado cusub. Labaduba waa mawduuc iyo xaalad, taas oo ka dhigaysa inay adagtahay in si tijaabo ah loo qeexo. Qaar baa xitaa odhan lahaa hal-abuurku waa ka-hortagga iyo dhiggiisa cilmiga.
Saynis yahanadu waxay go'aansadeen inay fahmaan hal-abuurka maskaxda. Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in hal dose oo ah psilocybin ay kordhisay fekerka hal-abuurka kediska ah inta lagu jiro hawlaha garashada. Ka qaybgalayaashu waxay heleen aragti dheeraad ah waxayna awoodeen inay abuuraan fikrado cusub xitaa usbuuc ka dib markii ugu horeysay ee qiyaasta. Isla sidaas oo kale miyay khuseeysaa microdosing? Tani waa waxa cilmi-baarayaashu ay isku dayayaan inay ogaadaan.
Microdosing iyo hal-abuurka: caddaynta
Silicon Valley, oo ah xarunta shirkadaha teknoolojiyadda sare sida Apple, Google iyo Meta, ayaa lagu doodi karaa inay tahay mid ka mid ah daraasadaha ugu waaweyn ee daraasadaha microdosing. Xirfadlayaashu waxay u jeesteen LSD iyo psilocybin si ay u kordhiyaan hal-abuurkooda oo ay u horumariyaan xirfadahooda, iyagoo sheeganaya in microdosing ay tahay jabsiga wax soo saarka ugu dambeeya.
Xitaa waxaa jira xog lagu taageerayo tan. Daraasadaha microdosers-yada ayaa muujiyay in labadaba kuwa hadda jira iyo kuwa hore ee microdosers ay muujiyaan hal-abuur badan, maskax furan iyo xikmad marka loo eego kuwa aan microdosers-ka ahayn. Falanqaynta 278 microdosers, hal-abuurka la wanaajiyey ayaa lagu soo warramey ku dhawaad ​​13% ka qaybgalayaasha waxayna ahayd faa'iidada saddexaad ee ugu badan ee la soo sheegay, ka dib markii niyadda ay soo hagaagtay iyo Xoogga saar.
Ilaa hadda, hal daraasad oo keliya ayaa si toos ah u baadhay saamaynta microdosing ee hal-abuurka. Waxaa lagu daabacay cilmi-nafsiga cilmi-nafsiga ee 2018, cilmi-baarayaashu waxay baareen sida psilocybin-ku jira truffles ay u beddeleen waxqabadka ka qaybgalayaasha 36 inta lagu jiro hawlo kala duwan. Qiyaasta yar-yar ka dib, ka qaybgalayaashu waxay muujiyeen fikir ka baxsan sanduuqa, fikrado badan oo xalinta mashaakilaadka, iyo faseexnimada iyo dabacsanaanta fikirradooda halabuureed.
Si kastaba ha ahaatee, daraasad 'calaamad-furan' ahaan, ka qaybgalayaashu way garanayeen waxay qaadanayaan. Daraasadda ayaa sidoo kale lagu sameeyay xubno ka mid ah Bulshada Cilmi-nafsiga, kuwaas oo laga yaabo inay horeba uga warqabeen faa'iidooyinka la soo sheegay ee microdosing. Markaa ma jiraan wax sheegaya in natiijooyinka la arkay aysan ahayn tusaale kaliya ee saamaynta placebo.
Dhowr indho-indho la'aan ah, daraasado lagu xakameynayo placebo - heerka dahabiga ah ee naqshadeynta tijaabada - ayaa muujiyay saameynta microdosing ee hal-abuurka, haddii wax kasta oo qarsoodi ah. Saynisku wali wuxuu hayaa waddo dheer oo loo maro, laakiin waxay u muuqataa in saamaynta microdosing-ka ay ka yar tahay go'aan cad sidii hore loo maleeyay.
Codso caddayn maskaxeed
Maskaxda degani waa furaha furaha hal-abuurka. Marka fikirradeenna werwerka ahi ay qaylodhaan, maskaxdeenna hal-abuurku waa la aamusaa. Sida warbixinnada anecdotal ay soo jeedinayaan, dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee yar-yar ayaa kaa caawin kara yaraynta walbahaarka iyo walaaca. Oo maadaama walaacu yahay dilaaga ugu dambeeya ee hal-abuurka, microdosing ayaa kaa caawin karta inay tan dib u celiso.
Waxa laga yaabaa inay adag tahay in si tijaabo ah loo cabbiro hal-abuurku, laakiin walaacu maaha. Cilmi-baadhayaashu waxay muujiyeen in microdoses-ka maskaxda ee DMT ay yareyn karaan walaaca noocyada xayawaanka. Haddii natiijooyin isku mid ah laga helo bini'aadamka, cilmi-nafsiga maskaxda ee 'microdosing psychedelics' waxay kor u qaadi kartaa xaalad xasilloon iyo caddayn maskaxeed oo naga caawin karta inaan helno kayd aan dhammaad lahayn oo hal-abuurnimo ah.
Aragtida ku aaddan daawooyinka dhimirka ayaa isbeddelaya. Sida caddaynta daaweynta dhimirku ay kor u kacdo, qaar badan ayaa fuushan mawjada dib u soo kabashada maskaxda ee qaabka microdosing.
Inkasta oo ay jiraan warar sheegaya in microdosing ay hagaajinayso wax soo saarka iyo hal-abuurka goobta shaqada, waaxaha HR kuma degdegaan inay ku taliyaan boqoshaada sixirka. Cilmi-nafsiga, oo ay ku jiraan LSD iyo psilocybin, ayaa ku sii ah dawooyinka Heerka A iyo Jadwalka 1 gudaha UK. Lahaanshaha iyo sahaydu waa sharci-darro, xitaa tiro yar, sidaas darteed waa muhiim in la tixgeliyo saameyntan sharci iyo khataraha kale ee suurtagalka ah ka hor inta aan la go'aansanin isticmaalka microdosing.
Caddaynta ayaa maqan oo saynisku waa uu dib u dhacayaa, laakiin way adag tahay in la rumaysto in isticmaalka hallucinogens-ka awoodda leh - xitaa miisaan yar - wax saameyn ah kuma laha habka aan u maleyneyno ama u fulineyno. Markaa baaritaanku wuu sii socdaa. Microdosing-ka maskaxiyan ma kicisaa hal-abuurka? Waqti ayaa sheegi doona.
Ilaha waxaa ka mid ah DailyMaverick (EN), Shaybaarka Dahabka ah (EN), caleen leh (EN), NCBI (EN)
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato CBD si aad uga baxdo…
EMCDDA waxay iftiimisay dhibaatada daroogada ee...
Daroogada casriga ah ee Modafinil ee ay isticmaalaan ciidamada Ingiriiska
Psilocybin waxay sii deysaa maskaxda niyad-jabka
Siyaasadda daroogada: Peter "Regulate" de Vries iyo ...
Daraasada Disorder Compulsive: Ketamine (CL369) Waxaa loo baadhay sida…
29 Oktoobar 2021
Daroogada casriga ah ee dahabka ah ee Rush Rush waxaa ka buuxa tamar dabiici ah